Water Play Area – Thet Nandar
Let’s all haveagame in the water play area.
16 Months old boy Heaven, he’s very happy in this time.
ဒီနေ့ Blazon Shopping Mall သွားတယ်။ ကလေးတွေ သင်္ကြန်အကြို ရေကစားဖို့ လိုက်ပို့ပေးတာ။ သားနဲ့ သမီးကတော့ အလွန်ပျော်။ ရေကူးကန် သေးသေးလေးတွေထဲမှာ ရေတွေထည့်ပီး ဆော့ကျတာ။ water slide လည်းပါတယ်။ အိမ်က ရေကူးကန်ကတော့ ပိုမြင့်ပေမယ့် အိမ်မှာက နှစ်ယောက်တည်းဆော့ရတာလေ။ အဲလိုမျိုး ကလေးတွေ အများနဲ့ဆော့တော့ သားနဲ့ သမီးက ပျော်တယ်။ ရေကစားကွင်းထဲမှာ ကလေးထိန်းပေးမယ့် ကောင်လေးတွေ ကောင်မလေးတွေလည်းရှိတော့ တော်တော် အဆင်ပြေတယ်။ သားသားကတော့ ရေကစားပီးတာနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတာပဲ (-.-) Zzzzzz
16 Months old boy ****